HTC dia miasa amin'ny smartphone 5G | Androidsis
Fantatra tsara izany HTC dia tsy nanao tsara eny an-tsena efa elaela izao. Nahazo fatiantoka goavana ny orinasa ary vokatr'izany dia voatery nanao fandroahana asa be loatra sy hampihena ny fandaniany. Na izany aza, ny zava-drehetra dia toa manondro fa hanohy amin'ny tolona izy, manohitra ny tsaho isan-karazany izay manondro ny mifanohitra amin'izany.
Vao tsy ela akory izay, ny mpamolavola zokiny HTC Kevin Duo dia nanambara tamin'ny alàlan'ny mombamomba azy Linkedin fa mbola mandeha ny orinasa ary dia miasa amin'ny finday avo lenta finday avo lenta entin-kery avy amin'ny processeur Snapdragon 855 an'ny Qualcomm, ilay chipset izay haseho amin'ny faran'ny taona.
Ity orinasa ity dia manatevin-daharana an'i Oppo, ZTE, Nokia, Samsung, LG, Xiaomi ary ny hafa izay miasa amin'ny telefaona 5G ihany koa. Raha ny marina, ny orinasa dia mizaha toetra an'i Qualcomm's Snapdragon 855, izay ho tonga miaraka amin'ny modem X24 na X50. Na dia ny modem voalohany voalaza aza dia manome ny safidin'ny fifandraisana efa misy eny an-tsena, ny X50 dia afaka manohana ny tamba-jotra 5G, noho izany dia aleon'ny Taiwanese telefaona iray izay manome SD855 an'ilay farany.
Ireo tatitra vao navoaka vao haingana dia mihevitra fa Qualcomm dia afaka manova ny nomenclature an'ny mpikirakira azy amin'ny chipset manaraka. Ny Snapdragon 855 (SDM855) codenamed "Hena" dia ho fantatra amin'ny anarana hoe SM8150, izay handrefesana 12.4 x 12.4mm. Mandritra izany fotoana izany, hifaninana amin'ny System-on-Chip Kirin 980 navoaka vao tsy ela ary ny chipset A12 ho avy Apple.
Na izany aza, ireo rehetra ireo dia mendrika ho tsaho, tsy maintsy miandry ny fanambarana ofisialin'ny orinasa isika, satria ny morale ambany izay ananany amin'izao fotoana izao dia afaka midika ho kapoka mafy izay mety hisakana azy tsy hanavao. Na izany aza, mety hidika koa izany fa misy antony matanjaka tonga miaraka amin'ny batterie recharged ary hanome antsika fahagagana izay mampitombo ny vola miditra aminao eny an-tsena. Miandry ny zava-drehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » HTC dia miasa amin'ny sahaniny manaraka: ho 5G io ary hitondra Snapdragon 855
Wall Kickers dia sehatra tena goavambe ho an'ny findainao Android